ကြှနျမကတော့ လကျစားခရြေတာကို မနှဈသကျဘူး – Shinyoon
ကိုယျ့အလှညျ့သူ့အလှညျ့တဲ့ မဟုတျဘူး ကြှနျမကတော့ လကျစားခရြေတာကို မနှဈသကျဘူး သူ့အလှညျ့မှာ ကိုယျ့အပျေါ ကွိုကျသလောကျ မကောငျးတာတှလေုပျပါကြှနျမ ၀ဋျကွှေးဆပျနတောဆိုပွီး ဖွလေိုကျလို့ရတယျ
ကိုယျ့ဘကျကတော့ အကောငျးဆုံးသော အရာတှပေဲပေးမယျ မတ်ေတာမပကျြပဲ စတေနာမပကျြပဲ ဖွူဖွူစငျစငျလေးပေါ့အခြိနျတနျရငျ ကံကွမ်မာက စီရငျပါလိမျ့မယျ ကိုယျ့ဘကျက ဘာကြိနျစာမှမလိုအပျဘူး
ဘာကြှနျစာမှလဲ မတိုကျရကျပါဘူး ကိုယျ့အပျေါလုပျရကျတဲ့သူက လုပျရကျပမေယျ့ကိုယျ့လိုနာကငျြရတာမြိုး ဘယျသူ့ကိုမှ မဖွဈစခေငျြဘူးလေ ပွီးတော့ ကြှနျမ လို ခံနိုငျရညျမရှိမှာလဲစိုးတယျ ဒါ အဖွူစငျဆုံးသော စကားပါ ဘာလုပျဇာတျမှ မပါဘူး
ကိုယျ့လို မနာကငျြပါစနေဲ့ ဆိုတဲ့ဆု . . . ၀ဋျမလညျပါစနေဲ့ဆိုတဲ့ဆုတှတေော့ သတိရတဲ့အခါတိုငျးတောငျးဖွဈတယျ တခြို့ဒဏျရာတှကေ အခြိနျကွာသှားလဲ မပြောကျမပကျြရှိနတေတျတာလေ စိတျမှာလာထငျတဲ့ ဒဏျရာတှပေေါ့ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ၀ဋျကွှေးပါလို့သာ ဆပျနရေတယျလို့ တှေးပါတယျ
ကိုယျကောငျးသလို ကိုယျ့အပျေါမကောငျးလို့လဲ တဈခကျြခကျြ ၀မျးနညျးတာကလှဲလို့ ဘာအမကျြဒေါသမှ မထှကျတော့ပါဘူး ၀ဋျကွှေးကို ရှောငျပွေးဖို့လဲ ထပျပွီး မကွိုးစားတော့သလိုနောကျထပျ ၀ဋျကွှေးတှလေဲ ထပျမသယျသှားခငျြတော့ဘူးလေ
ကိုယျ့အလှညျ့ သူ့အလှညျ့တဲ့ ကြှနျမတော့ လကျစားခရြေတာ မနှဈသကျဘူး သူ့အလှညျ့မှာတော့ ကိုယျ့အပျေါ မကောငျးတာတှေ လုပျခငျြလုပျပါ ကိုယျ့အလှညျ့ကရြငျတော့ ကံကွမ်မာသာ စီရငျပါစေ ။
ကိုယ့်အလှည့်သူ့အလှည့်တဲ့ မဟုတ်ဘူး ကျွန်မကတော့ လက်စားချေရတာကို မနှစ်သက်ဘူး သူ့အလှည့်မှာ ကိုယ့်အပေါ် ကြိုက်သလောက် မကောင်းတာတွေလုပ်ပါကျွန်မ ၀ဋ်ကြွေးဆပ်နေတာဆိုပြီး ဖြေလိုက်လို့ရတယ်
ကိုယ့်ဘက်ကတော့ အကောင်းဆုံးသော အရာတွေပဲပေးမယ် မေတ္တာမပျက်ပဲ စေတနာမပျက်ပဲ ဖြူဖြူစင်စင်လေးပေါ့အချိန်တန်ရင် ကံကြမ္မာက စီရင်ပါလိမ့်မယ် ကိုယ့်ဘက်က ဘာကျိန်စာမှမလိုအပ်ဘူး
ဘာကျွန်စာမှလဲ မတိုက်ရက်ပါဘူး ကိုယ့်အပေါ်လုပ်ရက်တဲ့သူက လုပ်ရက်ပေမယ့်ကိုယ့်လိုနာကျင်ရတာမျိုး ဘယ်သူ့ကိုမှ မဖြစ်စေချင်ဘူးလေ ပြီးတော့ ကျွန်မ လို ခံနိုင်ရည်မရှိမှာလဲစိုးတယ် ဒါ အဖြူစင်ဆုံးသော စကားပါ ဘာလုပ်ဇာတ်မှ မပါဘူး
ကိုယ့်လို မနာကျင်ပါစေနဲ့ ဆိုတဲ့ဆု . . . ၀ဋ်မလည်ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ဆုတွေတော့ သတိရတဲ့အခါတိုင်းတောင်းဖြစ်တယ် တချို့ဒဏ်ရာတွေက အချိန်ကြာသွားလဲ မပျောက်မပျက်ရှိနေတတ်တာလေ စိတ်မှာလာထင်တဲ့ ဒဏ်ရာတွေပေါ့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ၀ဋ်ကြွေးပါလို့သာ ဆပ်နေရတယ်လို့ တွေးပါတယ်
ကိုယ်ကောင်းသလို ကိုယ့်အပေါ်မကောင်းလို့လဲ တစ်ချက်ချက် ၀မ်းနည်းတာကလွဲလို့ ဘာအမျက်ဒေါသမှ မထွက်တော့ပါဘူး ၀ဋ်ကြွေးကို ရှောင်ပြေးဖို့လဲ ထပ်ပြီး မကြိုးစားတော့သလိုနောက်ထပ် ၀ဋ်ကြွေးတွေလဲ ထပ်မသယ်သွားချင်တော့ဘူးလေ
ကိုယ့်အလှည့် သူ့အလှည့်တဲ့ ကျွန်မတော့ လက်စားချေရတာ မနှစ်သက်ဘူး သူ့အလှည့်မှာတော့ ကိုယ့်အပေါ် မကောင်းတာတွေ လုပ်ချင်လုပ်ပါ ကိုယ့်အလှည့်ကျရင်တော့ ကံကြမ္မာသာ စီရင်ပါစေ ။